post အသစ်လည်းတင်မရပါလားနော်…….တင်ထားတဲ့ post တွေကလည်း comment off ဆိုလို့ပြန်ပြီး Edit လုပ်တာလည်းမရ……… စိတ်ပိန်တယ်…
သားဗိုက်ကောင် သားအမိ ဘယ်ရောက်သွားလဲဟင်.. ဖန်ဂေါ်လီ ၃လုံး တန်းလန်း ချိတ်ထားတဲ့ ပုံဖြစ်သွားပါလား။ အရင် သားဗိုက်ကောင် သားအမိ က သရုပ်ပီပြင်တယ်။ ကြုံလို့ ဝင်ပြောတာ ဘာမှ ဟုတ်ဘူး
ပုံလေးပြင်လိုက်သလို စာတွေလဲ နဲနဲပြန်ပြင်ပြီး နှစ်သစ်မှာ ရွာသားတွေကို မဖတ်မနေရ တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ခိုင်းလိုက်ရင် ကောင်းမယ်လို့ စိတ်ကူးရမိတယ် … မဖတ်တာကြာတော့ မေ့နေကြပြီလို့ ထင်မိလို့ပါ …
သဂျီးကို ဥပဒေ ပြင်ခိုင်းတာလား အဟိ..
ဒါဆို ပြင်ဆင်မဲ့ ဥပဒေ အသစ်မှာ ပိုစ် အသစ် တခု အတွက် ပွိုင့် ၅၀၀ဝ ကွန်မန်း တခုကို ပွိုင့် ၃၀၀ဝ ပြင်ဆင်ဖို့ အဆို တင်သွင်းပါတယ်။
ဟီးဟီး နောက်တာနော်.. ပိုစ် တခု ၈ဝ က နေ ၅ဝ ဖြစ်သွားလည်း ဘာမှ တတ်နိုင်ဘူး။ ပေးသလောက်နဲ့ ကျေနပ်ပါတယ်။
သဂျီးရေ ပို့စ်တွေလည်း တင်လို့မရဘူး။ ဒါထက် တင်ထားတဲ့ ပို့စ်တခုချင်းစီရဲ့ အောက်ခြေမှာ ဘယ်နှစ်ပုဒ်ရေးသလဲဆိုတာ ဖော်ပြတဲ့စာသားက perfect tense မိုလို့written ဖြစ်ရမှာ ဟုတ်ဖူးလား။ သဂျီးဆိုပြီး ထင်ရာမဆိုင်းနဲ့နော်။
About the Author: bigcat
kyaung has wrote 72 articles on this blog.
အဲဒါ … wordpress ရေးတဲ့သူတွေမှားတာ..။
ပြီးခဲ့တဲ့ တပါတ်ကတင်.. update လုပ်ပါဆိုလို့ လုပ်လိုက်ရတယ်လေ..။
အဲဒီပရိုဂရမ်မာတွေက … အင်္ဂလိပ်စာ သဒ္ဒါမကျေဘူးနဲ့တူတယ်..။
သူဂျီးက ရွာထဲမှာ အမှိုက်ပုံဖြစ်မှာစိုးလို့ ပို့စ်တင်လို့မရအောင် ပိတ်ထားတာနဲ့တူတယ် … ပို့စ်တင်ချင်ရင် သူဂျီးဆီမှာ ပါမစ်လျှောက်ရမလားမသိဘူး ….
ဟုတ်တယ်မဝေရေ ပို့စ်တင်လို့မရတာ ဆိုးတယ် ။ သူကြီး ဘာအကြံထုတ်နေလဲမသိဘူး
Amazon cloud ကိုပြောင်းတော့မလို့တောင်လုပ်နေတယ်..။ အဲဒါဆို စရိတ်တွေတက်ဦးတော့မယ်..။
Amazon Cloud ကို သိသူတတ်သူများ ရှိပါသလား..လို့..။
စရိတ်တက်မယ်ဆိုရင်တော့ ပွိုင့်ပေးတဲ့စနစ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ တင်ချင်တဲ့သူဆီကအခွန်ကောက်လိုက်ပေါ့ … မကောင်းဘူးလား ??
ပြည်ပနေသူတွေရဲ့ ပွိုင့်တွေကို ငွေသားနဲ့လဲပြီး လှူမယ်ဆိုတာ ရပ်လိုက်ပါလား။ ပွိုင့်ကတော့ ဆက်ပေးနေပေါ့။
ပြည်ပနေသူတွေ(အားလုံး)ကို … နကိုကတည်းက … ငွေသားနဲ့လဲပြီး လှူမယ်ဆိုတာ ..မထားထားပါဘူး..။
လျှောက်လာတဲ့သူတွေကိုပဲ .. စဉ်းစားရွေးမယ် ပြောခဲ့တာပါ..။
အခုထိ ..တယောက်ပဲ မေးလာတာမို ့.. အဲဒီတယောက်ပဲ.. ရှိပါတယ်..။
နောင်နှစ်မကူးခင် .. စဉ်းစားထားတဲ့ စံနစ်တခု ..လုပ်မလို့ .. ရေးနေပါတယ်..။
သိတဲ့အတိုင်း .. လူ ၄-၅ယောက်လောက်နဲ့ တိုင်ပင်ရဦးမှာမို ့ပါ..။
အဲဒီစံနစ်မှာတော့ … ပြည်ပနိုင်ငံအသီးသီးက မန်င်ဘာတွေကို ..သတင်းနဲ့ ငွေနဲ့လဲပြီး လှူတဲ့စံနစ်ထည့်ထားပါတယ်..။
ငွေလည်း နည်းနည်း ပိုများပါလိမ့်မယ်..။
ပွိုင့်ကိစ္စကတော့ ပေးတာနဲ့ မပေးတာ သိပ်တော့မထူးသလိုပါပဲ … တစ်နှစ်လုံးနေ့တိုင်းပို့စ်တင်ရင်တောင် တစ်သိန်းပြည့်ဖို့ မလွယ်သေးဘူးလေ …
ဖြစ်နိုင်ရင် အယ်ဒီတာတစ်ယောက်လောက်ထားပြီး သူကနေတဆင့်မှ ပို့စ်တင်မယ်ဆိုရင် စနစ်ပိုကျပြီး ပို့စ်တွေဖောင်းပွတာ သက်သာလာမယ်လို့ထင်တာပဲ …
ပွိုင့်စံနစ်က .. တယောက်ချင်းစီအတွက်ကသာ မထုးတာ..။
ဝက်ဘ်ဆိုက်အတွက်က .. မန်ဘာ ၃၀၀ဝ မှာ ပြည်တွင်းမန်င်ဘာ ၁၅၀ဝကျော်လောက်ကို တနှစ်စာလှည့်လိုက်ရင်ကို … တော်တော်များနေပြီ..။
တကယ်လည်း ဒီပွိုင့်စံနစ်က .. တဦးချင်းစီ အဆင်ပြေပါစေရယ်အတွက်ရည်ရွယ်တာ မဟုတ်ပါဘူး..။
ဒီလိုပဲ.. နက်ဝပ်တခု အခြေခံခို်င်သွားအောင်အတွက်လုပ်တာပါ..။
ဒီနေ့တင်.. ပြည်တွင်းက ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာတယောက်လိုချင်လို့ မေးလာတဲ့ ယူအက်စလူတယောက်ရှိတယ်..။
အဲဒါမျိုဆို .. ဒီမှာတင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်..။
နောက် .. ၃-၄နှစ်မှာ ..အဆက်အသွယ်ကောင်းလာတာနဲ့.. တော်တော် ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်..။
မန္တလေးဂေဇက်သတင်းစာဖက်မှာ .. လုပ်ငန်းရှင်တွေ ၃-၄ရာလောက် ရှိနေတယ်ဆိုတော့လေ..။
အလုပ်လိုချင်သူနဲ့..အလုပ်ပေးချင်သူတွေ ချိပ်မိသွားရင်ကို တော်တော် ကောင်းနေပါပြီ..။
ပြောရရင်.. သတင်းစာအတွက် … ဆောင်းပါးတချို ့လည်း .. ဒီမှာတင်နေတဲ့သူတွေထဲကနေ လစဉ်ဝယ်နေပါတယ်..။
အဲဒီစာမူခက .. နည်းနည်းအတို်င်းအတာ ရှိပါတယ်..။
အခုတောင် ..မဝေရဲ ့ဟင်းချက်နည်းတွေထဲက … တခုခုဝယ်မလို့ .. ကြည့်နေပါတယ်..။
သဂျီးတို့က မှတ်ချက်ရေးပြီး သတင်းပေးပါဆိုတာမှာ သတင်းပေးလည်း လုပ်မှ မလုပ်တာ ဒီလိုဘဲ ကြည့်နေတော့ ပိုစ်အဟောင်းတွေ ဖောင်းပွ ကုန်တာပေါ့။ ကြာတော့ မသိချင်ယောင်ဘဲ ဆောင်နေလိုက်တော့တယ်။
ကျွန်မက စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို တသွေမတိမ်း စာအုပ်ကြီးအတိုင်းလုပ်တတ်လို့ ဂေဇက်မှာ အယ်ဒီတာလုပ်လို့တော့ မဖြစ်နိုင်ပါ ….
ကိုခိုင်ရဲ့ အစီအစဉ်အသစ်တွေကို စိတ်ဝင်စားပါတယ် …
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအစီအစဉ်ကိုလဲ စိတ်ဝင်စားပါတယ် …
ကျွန်မကို အလုပ်အကိုင်တစ်ခု ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ရင် ဂေဇက်ကို တော်တော်ကျေးဇူးတင်မှာပဲ …
The website encountered an error while retrievinghttp://myanmargazette.net/wp-admin/post-new.php. It may be down for maintenance or configured incorrectly.
ဆရာကြီးလုပ်တာမဟုပ်ရပါ ygn ရောက်နေလဲ ကိုယ့်မွေးရပ်မြေရဲ့မတရားမှုလေး
တလအတွင်း (စာမူရှင်မဟုတ်သူများမှ )အဓိပ္ပ ါယ်ရှိသောကော်မန့်(Comment) ၁ဝခုနှင့်အထက်ရေးသားခံရသော စာမူကို ပွိုင့်(၁၀၀)ထပ်ဆောင်းပေးမည်။
တလအတွင်း ဖတ်သည့်အကြိမ် (View)၁၀၀ဝ နှင့်အထက်ရှိသော စာမူကို ပွိုင့်(၁၀၀)ထပ်ဆောင်းပေးမည်။
ပို့စ်တွေ ဖောင်းပွပြီး လေးလာတာလား? စည်းကမ်းချက်တစ်ခုချမှပြီး ဖြုတ်ချခဲ့ပါ့လား ? အချိန်ကာလနဲ့ မလျော်ညီတော့တဲ့ ပို့စ်မျိုးတွေ ထပ်နေတာတွေ အဲဒိလိုလုပ်လိုက်ရင်ပိုကောင်းသွားမလား?
မပြောမရှိ တောငပိပါ။ free software after rebate ချစ်သူများ ဇန်နဝါရီလ ၆ရက်နေ့အထိ ဗိုင်းရပ်သတ်တဲ့ဆော့ဖ်ဝဲတွေကို ဖရိုင်းစ်ဒေါ့ကွန်းမှာ ဝယ်လို့ရနေပါပြီ။ ရီဘိတ်နဲ့ဖရီးပေးတာ နှစ်မျိုးရှိတာ သတိပြုပါ။ ပထမက ဝယ်သူတိုင်းကိုပေးပြီး ဒုတိယကတော့ အရင်ကဝယ်ထားတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတခုခုရဲ့ အထောက်အထားနဲ့တွဲတင်ရပါမယ်။ ကျနော်ကတော့ ၆ဝတန် တခုဝယ်လိုက်ပါတယ်။ အိုင်စီးရီး အင်တဲလ်ပရောစက်ဆာနဲ့ လက်တော့ပ်ပေါချောင်ကောင်းလေးများ တွေ့ရင်လဲပြောကြပါအုံး။
နှစ်သစ်မှာ ရွာကြီးက ခြောက်ကပ်နေသလိုပဲ … ပို့စ်အသစ်ရှိနေအောင် တင်ပေးနေရတာတောင် အားမရှိဘူးဖြစ်နေပြီ …
ပြည်တွင်းမှာက အင်တာနက်နတ်..အင်တာနတ်ကြီး လည်ပင်းညစ်ခံရ… ပြည်ပမှာက .. နှစ်ကူးပိတ်ရက် .. ရာသီဥတုက .. ရွာသားတွေကို…လည်ပင်းညစ်နဲ့ဆိုတော့လေ..။
ယုုံဘူးယုံဘူးနဲ့ ကြုံဖူးမှသိမယ် ဆိုသူများအတွက် http://www.sagarwarmyae.org/?p=8558
တနေ့လုံးလိုလိုပဲ.. ဆာဗာဒေါင်းနေခဲ့ပါတယ်..။ ဆောရီးဗျို ့..။
( အပေါ်မှာ ကိုကြောင်ကြီး ကြိမ်းမန်း..မန်းလိုက်လို့နဲ့တူတယ်..)
ဝက်ဘ်ဆိုက်ထားတဲ့နေရာက ..ဆာဗာ ဘာတွေပြသနာဖြစ်လည်းမသိ.. ဘာမပြောညာမပြောနဲ့ .. လုပ်ထားတာပါ..။
ဖုံးတွေဆက်..။ မေးလ်တွေပို ့..တော်တော်လုပ်လို်က်ရတယ်..။
စိတ်နာသွားတာမို ့.. အမေဇုံကို ပြောင်းဖို့လုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျား..။
ဂေဇက်ကို ဝင်ကြည့်ရတာ တဖြည်းဖြည်း ပျင်းလာပြီ ..
Adminရေ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ Postတင်မလို့လုပ်တိုင်းမရတာကြာပြီ ဗလာချည်းပဲပေါ်လာလို့ လုပ်ရခက်လိုက်တာ ကြည့်ပြီး ဖြေရှင်းပေးပါဦး လာရေးထားတဲ့ Commentတွေကို ဖတ်ပေးပါဦး လာတာရေးသွားရတာ မဖတ်မိရင်တော့ ကျနော်တို့လည်း စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရပါတယ် ….အရင်က Postတင်လို့ရတယ် ခုမရတာ ကြာပြီ တစ်ပတ်ကျော်လောက်ရှိပြီ ဆိုက်ဒ်က ဘာဖြစ်နေလဲတော့ မသိပါဘူး ဘာကြောင့်လဲ ပြောပြလို့ရရင်ပြောပြပါဦး…
ဒို့ကတော့ ညည လူခြေတိတ် အမှောင်ဖုံးမှ.. ရွာထဲမှာ အလစ်ဝင်ပြီး ပိုစ်တင်တယ်။ တင်ဖို့တော့ စိတ်ရှည်လက်ရှည် စောင့်ရတာပေါ့ကွယ်။
ဒယ်ဒီ ဖားသား ပါပါး ဖေဖေ ပွိုင့်ဘယ်လိုလှူရလဲသိချင်လို့ပါ
Donate Points ကိုနှိပ်လိုက်ရင် Cubepoints-Donate ဆိုပီးအဖြူကွက်ပေါ်လာရော ပီးတော့ဘာမှ ဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူး
ဘယ်လိုဝင် ဘယ်လိုထွက် တစ်ချက်လောက်ညွှန်ကြားအုံး………ခည!
ပွိုင့်တွေကို .. တဦးနဲ့တဦးလွှဲပြောင်းခွင့် မရှိပါဘူးခင်ဗျ..။
အဲဒီတော့ ဒိုနိတ်လို့ မရပါဘူး..။
အဲဒါဆိုဘယ်တွေကို ဒိုနိတ်လို့ရပါလဲ ခည!
MZ ကိုတော့ ဒိုနိတ်လို့ ရကြောင်းပါ ခင်ဗျာ။
မန်ဘာတွေရစရာအကြွေး ဘီလီလျံ ချီသွားနိုင်ပါတယ်
ကျွန်တော် မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု မှ သမာဓိကောင်းကောင်းဖြစ်လက္ခံပေးနေပါတယ်
တစ်ယောက် တစ်ဒေါ်ဘဲလာကြတော့ ရမှာမနည်းပါဘူး
မူးပြီးခြေလွန်လက်လွန်ဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအတွက် အခမဲ့ ဥပဒေအကျိုးဆောင်တာတို ့
နေ ့စဉ်အရက်ဘိုးမတတ်နိုင်သူတွေအတွက် လက်တွေ ့အရက်ချက်သောက်နည်း nice n easy
http://www.michaeljonnyaungpuဗရုပ်သုတ္ခ.com မှာ အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါကြောင်း။
သဂျီး.. သဂျီးရေ…. မှတ်ချက်ရေးပြီး အတင်းပေးပို့.. အဲမှားလို့.. သတင်းပေးပို့လို့ ရတော့ဘူးလား.. သတင်းပေးချင်လို့ပါ..
အတင်းလဲ မပေးနဲ့ .. သတင်းလဲ မပေးနဲ့ .. သဂျီးက အဲဒါတွေ ဖတ်ပြီးအရေးယူဖို့ အချိန်မအားဘူး … သတင်းပေးတဲ့သူ လက်ညောင်းမှာစိုးလို့ စေတနာနဲ့ ဖြုတ်ထားပေးတာဖြစ်လိမ့်မယ် …
လွတ်လပ်မှုကို မြတ်နိုးတဲ့ သဂျီးရဲ့စေတနာကို လေးစားသောအားဖြင့် ရွာသူရွာသားတွေက ဒူးစာ ဒုတ်စာကို သေချာနားလည်အောင် ဖတ်လိုက်ရင် ပြီးတာပဲ မဟုတ်ဘူးလား ..
အတင်းပေး သတင်းပေးရင် ဖရီး..
ဒူးစာ ဒုတ်စာမှာ တည့်တည့်ရေးရင် တစ်ဆယ် ရမယ်.. တွက်ကြည့်တော့လည်း တွက်ခြေတော့ ကိုက်သားနော်.. မဆိုးဘူး.. ဟဲဟဲ..
သဂျီးမင်းခင်ဗျား မန်းလေးဂေဇက်ပုံနှိပ်သတင်းစာ ဒီဇင်ဘာ၂၀၁ဝ အွန်လိုင်းအက်ဒီးရှင်းကို ဘယ်မှာဒေါင်းရပါမလဲ။
အဲဒီမှာ တင်ချင်တဲ့ဖိုင်တွေ၊ ဗီဒီယိုတွေလည်း တင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ..။
သဂျီးတို့ သတင်းစာကို ဒီတစ်ခါပဲ ဖတ်ကြည့်ဖူးတယ် … ကြော်ငြာများတယ်နော် …
ဟုတ်ပ ဟုတ်ပ။ သဂျီးဟိုတလောက ကားသစ်ဝယ်စီးနေတာပဲ ကြည့်တော့ဗျာ။
သဂျီးမင်း မအားသေးဘူး.. နှစ်လုံးပြူး သံချေး တက်နေလို့.. အမဲဆီ သုတ်ပြီး ပွတ်နေတယ်။ နောက်မှ အကြောင်းပြန်မယ်။
ဟော! :O ရွာသူ
ရွာသူ နှောင့်နေတယ် ရွာသူနှောင့်နေတယ်
စလောင်းဖုံး နှစ်ချပ်တီး လွှတ်လိုက်လေ ရွာသူနှောက်ယှက်ရင်
အဘနီ ညံလိုက်တာ.. စလောင်းဖုံး နှစ်ချပ် တီးရင် ကျားကိုက်တတ်တယ် သိဘူးလား။ ဒီ အရွယ်ကြီး ရောက်နေပြီ ဒါလေးတောင် ကြားဘူးဘူး။ ကလေးတွေတောင် သိတယ်။ ဒါကြောင့် မတီးတာ.. ရွာထဲ ကျား ဝင်ရင် ရွာထဲက လူတွေ ကျားကိုက်ခံရနိုင်တယ်လေ။
စလောင်းဖုံး နှစ်ချပ် တီးရင် ..ဆိုတာအမျိုးသမီး၂ယောက် ရဲ့ လက်စဘီယန်ကိစ္စကိုပြောတာဖြစ်ပြီး .. ကျားကိုက်တတ်တယ် ဆိုတာ .. အဲလိုလုပ်နေရင်..ယောက်ျားဝင်လာတတ်တယ်..လို့ ရှေးလူကြီးတွေ ဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပါယ်..သိကြလို့ ဆက်ပြောနေကြတာလားဟင်..။